မမဖြိုးကိုချစ်တဲ့ မိုးရေစက်တွေ | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on December 25, 2010
မလှမပ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလေ …..
အို…. ချစ်ရပါသော မမဖြိုး
တိတ်တခိုးပဲ လွမ်းနေဖို့ရာ အတွက်လား
မမ ဘာနဲ့များ အလျော်အစားပေးမှာလဲ
မပြီးသေးတဲ့ ကဗျာတစ်ဝက် ရှိတယ်
မမဖြိုးကိုချစ်တဲ့ နှလုံးသွေးတစ်စက် ရှိတယ်
စံပယ်ပွင့်ဆဲ… ဝေး… ဝေး…….
ဘယ်တော့မှ စဲမှာလဲ မိုးရယ်
မမဖြိုးလည်း….. ပျော်ရော့မယ်………။	။
စုံထောက်မဂ္ဂဇင်း၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၀၇။
← ဖို-မ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ပညတ်တော်များ(အစ္စလာမ်)